एक महिनामा थपिए १२ लाख मतदाता, थपिएका मतदाताले भोट दिन पाउलान त तेस्रो चरणको चुनाबमा ? - TAJA KHAWAR
एक महिनामा थपिए १२ लाख मतदाता, थपिएका मतदाताले भोट दिन पाउलान त तेस्रो चरणको चुनाबमा ?
August 20, 2017 Taja Khawar पत्रपत्रिका/अनलाइन 0
काठमाडौं, ४ भदौ, निर्वाचन आयोगले एक महिनामा करिब १२ लाख मतदाता थपिएको जनाएको छ । स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि आयोगले १ साउनबाट एक महिनासम्म देशैभर मतदाता नामावली संकलन थालेको थियो ।
यसअघि एक करोड ४० लाख मतदाता थिए । नयाँ मतदातासहित देशभर मतदाताको संख्या एक करोड ५२ लाख पुगेको छ । आयोगले देशभर करिब आठ सय स्थानबाट एक महिनासम्म एकैसाथ फोटोसहितको मतदाता नामावली संकलन गरेको थियो । ७४४ स्थानीय तहको केन्द्र, हरेक जिल्ला प्रशासन कार्यालय र निर्वाचन आयोगबाट एकैसाथ नामावली संकलन भएको थियो ।
फोटोसहितको मतदाता नामावलीमा नाम लेखाउन अन्तिम दिन देशभरका मतदाता नामावली संकलन केन्द्रमा नागरिकहरूको भिड लागेको थियो । आयोगले मतदाता नामावलीमा नाम लेखाउन लाइनमा बसिसकेका सबैको नाम लेखाउन निर्देशन दिएको छ ।
सबै मतदाता नामावली संकलन केन्द्रका प्रमुखहरूलाई राति अबेरसम्म भए पनि लाइनमा बसिसकेकालाई नामावली नभरी नपठाउन आयोगले निर्देशन दिएको प्रवक्ता शर्माले बताए ।
स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने
निर्वाचन आयोगले थपिएका नयाँ मतदाताले २ असोजमा २ नम्बर प्रदेशमा हुने स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने बताएको छ । २ असोजमा हुने तेस्रो चरणको निर्वाचनमा निर्वाचन मिति घोषणा हुनुअघि मतदाता नामावलीमा नाम लेखाएकाले मात्र मतदान अधिकार पाउने प्रवक्ता शर्माले बताए ।
‘अहिले थपिएका मतदाता नामावली तेस्रो चरणको निर्वाचनका लागि सार्वजनिक हुँदैन, उनीहरूले मतदान गर्न पाउँदैनन् । आगामी मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा उहाँहरू मतदाता बन्नेछन्,’ शर्माले भने । (नयाँ पत्रिका दैनिकबाट) भिडियो तलको बक्समा क्लिक गरे खुल्छ होला !
बधाई छ सम्पूर्णलाई – नेपाल साफ यू–१५ च्याम्पियनसिपमा माल्दिभ्स विरुद्ध गोल बर्षा गर्दै सेमिफाइनलमा प्रवेश